Ny fananganana fantsom-piraim-bazaha vita amin'ny plastika farany vy - Sina Mpanamboatra fantsom-pifangaro vy-plastika farany, Mpamatsy
Sodina vy mifono vy mifono vy
Tombony ho an'ny vokatra ◎ Izy io dia misy fitoniana tsara sy fanoherana ny fiatraikany. Eo ambanin'ny fepetra 110 degre sy ny fihenjanana amin'ny tontolo iainana an'ny 1,9 MPa, dia nosedraina nandritra ny 8760 ora araka ny fenitra iraisam-pirenena. Fantatra fa tsy nisy namoaka na nanimba ny fantsona. Ny fantsom-pe-RT dia afaka misoroka ny fifandirana sy ny fiatraikany amin'ny fantsona mandritra ny fananganana, ary manana fahombiazan'ny vidiny tsara. ◎ Izy io dia manana tombony amin'ny lanjan'ny maivana, androm-piainana maharitra, manovaova tsara ary mora miondrika. Raha ampitahaina amin'ny XPAP, ...
Sodina mifangaro polyethylene mahazaka hafanana miaraka amin'ny harato vy voaravaka
Ny fantsom-panafody polyethylene thermoprotected prefabricated dia karazana fantsom-panafanana vaovao, izay misy fantsom-piasa miasa (ao anatin'izany ny fittings), polyurethane henjana foam insulation, polyethylene shell shell of close close of composition. Rehefa lasa vatana iray izy telo, nalevina mivantana tamin'ny tany, ny fihenjanana fanitarana hafanana ateraky ny fiovan'ny mari-pana amin'ny fantsona anatiny dia nafindra tao amin'ny sosona insur polyurethane. Ny fantsona ivelany, izay iharan'ny fikorontanan'ny tany, dia afindra ihany koa ...
Paompy mitambatra polyethylene mitambatra vy ho an'ny famatsian-drano
Ny fantsom-boaloboka vita amin'ny volo vita amin'ny vy vita amin'ny vy dia ny fanaovana lavaka haingam-pandeha amin'ny takelaka vy manify avo lenta ary natao ho fantsom-by misy rindrina matevina misy lavaka amin'ny fantsom-bozaka argon arc ho lasa fanamafisana. Ny plastika dia alefa any ivelany sy ivelan'ny fantsom-by vita amin'ny rindrina matevina misy lavaka. Ny plastika amin'ny rindrina ivelany dia mifamatotra mafy amin'ny alàlan'ny mason-koditra mba hamorona iray manontolo amin'ny fantsom-by vita amin'ny vy manify. Toy izao ny fizotry ny famokarana: esory ny ...